1। Sermorelin Acetate के हो?
2। एक्शन-सेर्मोरेलिन एसीटेटको तंत्र
3। Sermorelin Acetate लिने लाभहरू
4। हामी कसरी Sermorelin Acetate प्रयोग गर्न सक्छौं?
5। कहिलेकाँही हामी सर्र्मोरिन एसीनेटको नतिजा देख्न सक्छौं?
6। Sermorelin एसीटेट साइड इफेक्ट
7। Sermorelin Acetate खरीद गर्न उत्तम स्थान
1. Sermorelin Acetate के हो?
Sermorelin एसीटेट एक चिकित्सीय यौगिक हो जुन संरचनात्मक रूप देखि प्राकृतिक वृद्धि हो हार्मोन जारी हार्मोन (GHRH) को समान छ।
Sermorelin एसीटेट को पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्पादन गर्न को लागि को रूप मा राम्रो तरिकाले अधिक वृद्धि हार्मोन को उत्पादन को क्षमता को लागि जानिन्छ।
Sermorelin Acetate (86168-78-7) एक जैव-समान सिंथेटिक हार्मोन पेप्टाइड अनुक्रम हो जुन 29 अमीनो एसिड देखि बनेको छ। एफडीएले यस औषधिलाई बालबालिकाको उपचारको लागि स्वीकृत गर्यो, तर विश्वभरका धेरै मेडिकलहरूले वयस्क रोगहरूमा वृद्धि हार्मोन स्तर बढाउन लेबलमा सेर्मोरेलिन एसीटेट प्रयोग गर्छन्।
अन्य HGH पूरक को विपरीत, Sermorelin Acetate लेबल को उपयोग को उपयोग गर्न सकिन्छ। अर्कोतिर सेरमोरेलिन लागत अन्य समान औषधिहरूको तुलनामा कम छ। यो औषधि पनि रातमा प्रयोग हुने निर्धारित छ र भोजन लिनु अघि वा कम्तिमा आधे घण्टा लाग्न सक्छ। रातोमा सेरमोरेलिन एसीटेट ले तपाईंको शरीरको प्राकृतिक चक्रलाई पूर्ण हार्मोनलाई वृद्धि हार्मोनको साथ साथै R Pit मार्फत आफ्नो पिट्युटरी ग्राउन्ड उत्तेजित गर्दछ। अर्कोतर्फ, Sermorelin Acetate दुई रूपहरूमा उपलब्ध छ, जुन छ मौखिक Sermorelin तैयारी र lyophilized इंजेक्शन योग्य रूप।
2. एक्शन-सेर्मोरेलिन एसीटेटको तंत्र
शरीरमा विकास हार्मोन उत्पादनको उत्थान गरेर सफर्मेलिन काम गर्छ र प्रायः हार्मोन कमीको साथ बच्चाहरु लाई निर्धारित गरिएको छ। यद्यपी ड्रग बच्चाहरु मा प्रयोग को लागी अनुमोदित भएको छ, चिकित्सकहरुलाई पनि एहसास भएको छ कि वयस्कों को लागि निर्धारित जब सेर्मोरेलिन पनि आवश्यक छ र उपयोगी छ। उदाहरणका लागि, केहि वयस्कों Sermorelin सँग लड्न लड्नुहोस् जबकि अन्य सेर्मोरेलिन र वजन घटाने संग सहज हुन्छन्। दबाइले तपाईंको शरीरमा बढि विकास हार्मोन उत्पादन गर्न पिट्यूटरी ग्रंथहरू ट्रिगर गर्छ।
GHRH एक पेप्टाइड हो जुन 29% अमीनो एसिड समावेश गर्दछ जुन विकास हार्मोनमा उपस्थित हुन्छ। यी अमीनो एसिड GHRH मा सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति हुन्। सामान्यतया, मानिसहरूको आयु जस्तै विकास हार्मोनहरू पिट्यूटरी गिलास घटाइएको छ र विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञहरूले गरेको अध्ययनमा बहुमूल्य अध्ययनले साढोरेलिनले तपाईंको शरीरमा युवा स्तरहरूमा वृद्धि हार्मोन स्तरहरू पुनर्स्थापित गर्न सक्षम छन् IGF-1 लाई बढावा गरेर ( इन्सुलिन जस्तो विकास कारक 1)।
तथापि, सेर्मोरेलिन एसीटेट लाभहरूको अनुभव गर्ने सबैभन्दा राम्रो तरिकाले सही खुट्टा लिन र तपाईंको डाक्टरको खुट्टा निर्देशनहरू पनि पछ्याउनु हो। लागूपदार्थ ओभरडाउन अपरिवर्तनीय साइड इफेक्टहरूको नेतृत्व गर्न वा तपाइँलाई स्वास्थ्य परिस्थितिहरू अघि बढाउन सक्नुहुनेछ। Underdosing ले तपाईंलाई Sermorelin एसीटेट फायदाहरूको मजा लिन मौका पाउनेछ। तपाईंले औषधिलाई अनलाइन प्लेटफार्मबाट वा फार्मेसीबाट पनि सजिलै पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ, चिकित्सा परीक्षाबाट फर्केर बिना औषधि लिनु हुँदैन।
3. Sermorelin Acetate लिने लाभहरू
यद्यपि सेर्मोरेलिन लागत बजारमा समान औषधहरू भन्दा कम छ, यसले गुणस्तरको परिणामहरू उद्धार गर्दछ. त्यहाँ विभिन्न छन् सार्मोरेलिन एसीटेट परिणामहरू त्यो प्रयोगकर्ताहरू वा बिरामीहरू जसले यसलाई सही रूपमा लिन्छन् र डाक्टरको निर्देशनहरू पछ्याउँछन्। यो औषधि प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण फाईदा भनेको हो कि तपाईं खुसी फारम को छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाई संग सहज छ। त्यहाँ मौखिक खुट्टा छ भने तपाईं इंजेक्शनहरूसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न र तपाईं इंजेक्शन योग्य खुराकको लागि पनि जान सक्नुहुन्छ, तर परिणाम समान छन्। Sermorelin Acetate समीक्षाहरू यो औषधि लिन पछि केहि प्रयोगकर्ताहरू आनन्दित छन् फाइदाहरू हेर्नको लागि उत्तम ठाउँ हो। त्यहाँ अन्य महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू छन् जुन तपाइँले यो औषधी लिनको लागि पाउनुहुनेछ, र तिनीहरू यसमा समावेश छन्:
★ Sermorelin Acetate प्रभाव को प्रभावहरु लाई लडने को लागि
यो औषधि पनि बजारमा सबैभन्दा उत्तम विरोधी उमेरका पूरक मध्ये एक मानिन्छ किनभने यसले ऊतक बढाउँछ र तपाईंको शरीरमा क्षतिग्रस्त सेलहरू मद्दत गर्दछ। यो तपाईंको छाला राम्रो परिस्थिति र जवानमा राख्छ, यसरी छाला र कमजोर जोडीहरूमा राम्रो रेखाहरू जस्ता उमेरका प्रभावहरू कम गर्दै। तपाईंको उपस्थितिमा परिवर्तन गर्न कम हार्मोन नतिजा नतिजाहरु र डोडोपी वा ढीलो छाला र झिल्लीहरूको मुख्य कारणको लागि जानिन्छ। को अधिकांश Sermorelin Acetate समीक्षाहरू संकेत गर्नुहोस् कि धेरै लागू औषध प्रयोगकर्ताहरू परिणामहरू अझ खुसी छन् त्यसैले उमेरको लक्षण मेटाउन।
विश्वभर, लाखौं मानिसहरू अग्लो लडाइँ सेर्मोरेलिनसँग र परिणामहरू धेरै प्रभावशाली छन्। Sermorelin अपर्याप्त HGH को कारण सबै समस्याहरु लाई ठीक गरेर तपाईंको शरीर को सामान्य कार्य को पनि पुनर्स्थापित गर्दछ। सामान्य शरीर प्रतिक्रिया र सुरक्षात्मक तंत्र को आरंभ गर्न को लागी दबाइ को क्षमता उच्च HGH स्तर को जवाब दि्छ प्रयोगकर्ताहरु लाई उनको लगत को सुधार गर्न र उमेर को लक्षण को कम गर्न को लागी सक्षम गर्दछ।
★ वजन घटाने को लागि Sermorelin एसीटेट
विभिन्न विद्वानहरूले विभिन्न अध्ययनहरू स्थापना गरेका छन् कि मोटापाले बलियो पार्ने र वजन कम गर्ने वयस्कहरूलाई स्वस्थ वजनको तुलनामा कम हार्मोनको स्तर हुन सक्छ। वास्तवमा, धेरै व्यक्तिहरू सेमेरोरेलिन मनपर्छ र तौल घट्नु खुट्टा आफ्नो वजन तय गर्न को लागी। सार्मोरेलिन एसीटेट शरीरमा हर्मोन उत्पादन उत्तेजना मार्फत वजन घटाने व्यक्तिले अधिक वजनमा मद्दत पुर्याउन दाहिने औषधि साबित भएको छ। दबाउ शरीरमा विकास हार्मोन वृद्धिको साथ पनि सम्बद्ध छ, जुन हड्डी घनत्व र मांसपेशी जनको विकास र यसको शरीर वसा कम गर्दछ। थप जानकारीको लागि, तपाईंको वजन घटाने औषधी वा आहार चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
★ Sermorelin Acetate को अन्य लाभ
त्यहाँ पनि अन्य फाइदाहरू छन् जुन तपाइँले यो शक्तिशाली औषधी लिनको लागि मज्जा लिनुहुनेछ, र तिनीहरू निम्नानुसार छन्।
सुधारिएको खनिज घनत्व; Sermorelin अध्ययन एचजीएच को कमी साबित गरेको छ कि वयस्कों मा हड्डी घनत्व को कमी को कारण हुन्छ, जो ओस्टियोपोरोसिस देखि पीडित को जोखिम बढ्छ। 12 महिना वा बढीका लागि सेर्मोरेलिन लिन तपाईँको हड्डी घनत्वलाई सुधार गर्न सक्छ साथै साथै ओस्टियोपोरोसिसको विकासको सम्भावना कम गर्न सक्छ।
मांसपेशी बल बढाउँछ; परिवर्तनको कारणले गर्दा यो औषधि तपाईंको शरीरमा बनाउँछ, विकास हार्मोन उत्पादनमा सुधारको स्थितिमा, जो मांसपेशी भवनको नेतृत्व गर्दछ, यसले मांसपेशी बल पनि बढाउँछ। तपाईंले 12 महिनाको लागी औषधि लिन पछि राम्रो परिणामहरू अनुभव गर्नुहुनेछ।
सेक्स ड्राइव सुधार गर्नुहोस्: विकास को कम स्तर वाला व्यक्ति हार्मोन को सामान्यतया कम शरीर ऊर्जा स्तर को कारण उनको मुक्तता संग समस्या छ। वयस्कों को अधिकांश जो स्मेरोरेलिन एसीटेट को प्रयोग गरेको छ उनको सेक्स ड्राइव संग सुधार को साथ साथै समय देखि पहिले स्नेहन को समाधान प्राप्त गरेको छ।
छाला मोटाई सुधार छाला कोलागन को कमी र तपाईंको शरीर मा निम्न वृद्धि हार्मोन स्तरहरु को मोटाई परिणाम। सौभाग्य देखि, Sermorelin Acetate सबै यी छालाको अवस्था समाधान गर्ने उत्तम औषधि हो।
Metabolism; तपाईंको शरीरको तंत्रमा वृद्धि हार्मोन कमी कम से कम आराम चयापचय हुन्छ, र सेर्मोरेलिन एसीटेट थेरेपी यस अवस्थालाई उल्टो गर्न सक्छ। एचसीएच थेरेपी पनि प्रोटीन संश्लेषण बढाने मा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभािन्छ, कार्बोहाइड्रेट चयापचय सामान्यकृत, र मोटो ओक्सीकरण को बढावा संग को रूप मा राम्रो तरिकाले बुरी कोलेस्ट्रॉल को कम गर्दछ। एचसीजी स्तर सुधार गर्न मेटाबेलिज्म प्रभावले उत्कृष्ट निकायको स्वास्थ्य र संरचनालाई पनि परिणाम दिन्छ।
केहि सामान्य सर्र्मोरेलिन Acetate फायदाहरू समावेश छन्; सहनशीलता बढ्यो, बढाएको दुबला शरीरको मासु, सुधारिएको घाव उपचार, प्रतिरक्षा र हृदय रोग बढाउने, र गुणस्तरको निद्रा।
4. हामी कसरी Sermorelin Acetate प्रयोग गर्न सक्छौं?
कुनै पनि लागू औषधिको प्रयोग यति धेरै Sermorelin Acetate एक चिकित्सकीय परीक्षा को गुजरने पछि आफ्नो डाक्टर को निर्देशित र निर्देशित हुनु पर्छ। कहिलेकाँही लेबलमा दिइएको खुट्टाले तपाइँलाई उपचार गर्न आवश्यक अवस्थाको स्तरमा अधिक वा कम हुन सक्छ। यसकारण तपाईंको चिकित्सकले राम्रो परिणामको लागि सही खुट्टा र चक्र सेट गर्नुपर्छ। खुट्टाले महत्त्वपूर्ण रूपमा तपाइँलाई उदाहरणको लागि प्राप्त गर्ने आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ सार्मोरेलिन र वजन घटाने खुट्टा सागरोरिनिन खुट्टासँग लड्ने युद्धबाट भिन्न हुन सक्छ। सधैँ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ आफ्नो चिकित्सक द्वारा दिएका सबै निर्देशनहरू पछ्याउनुहोस् र तपाईंसँग सर्र्मोरेलिन Acetate खुट्टा लिन सुरु गर्नु अघि आफ्नो सबै चिन्ताहरू उठाउनुहोस्।
सामान्यतः, सेरमोरेलिन एसीटेट तपाईंको घर, डाक्टरका कार्यालय, वा नजिकैको क्लिनिकमा इंजेक्शनको माध्यमबाट प्रशासित गरिन्छ। वैकल्पिक रूपमा, तपाईंको चिकित्सकले तपाईंलाई खुसीको लागि क्लीनिकमा नियमित भ्रमण गर्ने बरु घरमा आत्म-इंजेक्शन कसरी गर्ने भनेर प्रशिक्षित गर्न सक्छ। तथापि, जब खुल्ला इंजेक्शन गर्दै, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं इंजेक्शन प्रक्रियाहरु लाई सही ढंग देखि दबाइहरु को रूप मा सिखाए अनुसार को पालन गर्नुहोस। ओभरडाइज वा पनि अनुचित इंजेक्शनहरूले गम्भीर साइड इफेक्टहरूको नेतृत्व गर्न सक्दछन्, जुन तपाईंले सर्र्मोरेलिन एसीटेट लिँदा के आशा गर्नुहुन्न। साथै, औषधी लिँदा निम्नलाई विचार गर्न सम्झनुहोस्;
जाँच गर्नुहोस् यदि सेर्मोरेलिन एसीटेट विलम्बित छ वा यसमा केहि कणहरू हुन्छन् भने, यदि त्यसो भए यसलाई प्रयोग नगर्नुहोस्। अर्कोतर्फ, यदि शोक क्षतिग्रस्त वा फटाएको छ भने, पनि ड्रगबाट टाढा रहनुहोस् र निर्देशनको लागि तुरुन्तै तपाईंको डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्।
यसलाई मिश्रण गर्दा कहिले काँही सर्र्मेलिन एसीटेट हिलाउनुहोस्।
सधैँ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाई Sermorelin एसीटेट इंजेक्शन गर्नुहोस् मिश्रण पछि। यो पनि सुझावयोग्य छ कि तपाईंले अप्रयुक्त औषधि छोड्नु भयो।
यदि तपाइँ कुनै अन्य विकास हार्मोन पूरक प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ आफ्नो उपोमेलिन एसिटेट खुट्टा लिन सुरु गर्नु अघि कम्तिमा एक हप्ता लिनु पर्दछ। तपाईंको औषधि वा फार्मासिस्टका साथ तपाईका सबै प्रश्नहरू वा चिन्ताहरू उठाउनुहोस् र यदि तपाईं एकै वा अन्य मेडिकल अवस्थाको लागि दबाइमा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई सूचित गर्नुहोस्। यसले तपाईंको डाक्टरको लागि सही सल्लाह प्रदान गर्न सजिलो बनाउनेछ किनभने केही औषधिहरूले तपाइँको शरीरमा सेर्मोरेलिन कार्यहरूमा हस्तक्षेप गर्न सक्दछ।
सधैं, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ औषधि राख्नु हुन्छ, बालबालिकाहरू बाहिर बालबालिका पुग्न र तपाईंको पादरीबाट टाढा। प्रशासनमा व्यवस्थित सुई वा अन्य कुनै पनि सामग्री पुन: प्रयोग नगर्नुहोस् Sermorelin खुराक। अर्को महत्त्वपूर्ण पहलू यो छ कि तपाईं कसरी प्रयोग पछि उत्पादन को निदान गर्नुहुन्छ। तपाईंको चिकित्सकसँग परिक्षण गर्नुहोस्, तपाईंको क्षेत्रको औषधि उत्पादनको सही निपटानको लागि उत्तम र स्थानीय नियमहरूमा तपाईंलाई सल्लाह दिन।
यदि तपाइँ कुनै सेमेरोलोलिन एसीटेट खुराक छोड्नु भएको छ भने, तपाइँले यसलाई कम्तीमा समय सम्भव हुन सक्नुहुनेछ। यद्यपि, यदि तपाईले बिस्तारै ध्यान दिनुहुन्छ भने अर्को खुट्टाको लागि यो लगभग समय छ, तपाईं छुटेको खुट्टा छोड्न सक्नुहुनेछ र अर्कोमा जानुहोस्। डुबाइएका एक को क्षतिपूर्ति गर्न डबल खुराक नपनाउनुहोला किनकि ओभरडाइड हुनेछ र अग्र साइड इफेक्ट गर्न सक्छ। तपाईं आफ्नो खुराक छुटेको सूचना दिंदा तपाईं तदनुसार सल्लाह दिन आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्न सक्नुहुन्छ।
यसको अतिरिक्त, सेर्मोरेलिन र वजन घटाने को लागी यो राम्रो आहार र workouts संग खुराक संग यदि यो एक राम्रो विचार हुन सक्छ।
(1) सर्र्मोरेलिन एसीटेट को को रूप मा उपलब्ध छ?
यो औषधि दुई प्राथमिक रूपहरूमा अवस्थित छ, जुन इंजेक्शन र मौखिक तयारी समावेश गर्दछ, तर तिनीहरू दुबै समान परिणामहरू उद्धार गर्छन्। फारमहरू समावेश छन्;
♦ Lyophilized इंजेक्शन योग्य फारम यो यो सर्जोरेलिन Acetate को इंजेक्शन योग्य छ जसको अर्थ यो केवल इंजेक्शन को माध्यम ले प्रशासित हुनु पर्छ। तपाईं या तो आफैले इंजेक्शन गर्न सक्छन् या खुराक को प्रशासन को लागि आफ्नो चिकित्सकीय परिसर को नियमित दौरा अनुसूचित गर्न सक्छन्। धेरै अवस्थामा, तपाईंको डाक्टरले तपाईलाई 12 महिना वा धेरैका लागी औषधि लिनु पर्छ किनभने तपाईले घरबाट कसरी इन्जेक्सन गर्ने भनेर प्रशिक्षित गर्नेछ।
♦ मौखिक तैयारी - यो सर्र्मोरेलिन मौलिक रूप हो, जसको अर्थ यहाँ तपाईंले इंजेक्शनको दुखाइबाट जोगाउन आवश्यक छैन। तपाईं संग सहज हुनुहुन्छ जो निर्भर गर्दछ, तपाईं आफ्नो लागि राम्रो खुराक फारम चयन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं इंजेक्शनहरूसँग ठीक हुनुहुन्न भने, तपाईं मौखिक खुराक को वर्णन गर्न आफ्नो चिकित्सकलाई सधैं अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ। सम्झनुहोस्, तपाईं मौखिक र इंजेक्टेबल डाउज दुवैमा लिन सक्नुहुन्न।
(2) प्रयोग गर्नु अघि तपाईलाई थाहा छ?
औषधि जारी गर्दा यो वृद्धि हार्मोन जारी गर्दा धेरै सावधानी रहनु आवश्यक छ भने सही साइड इफेक्टहरूको नेतृत्व गर्न सकिँदैन। एक फार्मेसिबाट वा अनलाइन प्लेटफर्ममा सेरमोरेलिन एसीटेट खरीद नगर्नुहोस् र तपाईंको औषधिको सल्लाह बिना प्रयोग गर्न सुरु गर्नुहोस्। सम्झनुहोस्, मानव निकायहरू फरक छन् र केवल किनभने यो औषधीले तपाईंको मित्रको लागि काम गर्यो, यो स्वतन्त्र छैन कि यो तपाईंसँग राम्रो हुनेछ। यसैले यो एक मेडिकल परीक्षा पास गर्न को लागी सल्लाह दिएको छ र तपाईंको स्वास्थ्य व्यवसायलाई पनि तपाईंको लागि सही खुराक सेट गर्न अनुमति दिन्छ। आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्नुहोस्, यदि तपाइँ कुनै अन्य औषधिको अधीन हुनुहुन्छ भने केही ड्रगहरू सार्मोरेलिन एसीटेटसँग राम्ररी काम गर्दैन। केही स्वास्थ्य परिस्थितिहरू जुन तपाईले गरेको छ भने तपाईले तपाइँको डाक्टरलाई सूचित गर्नु पर्छ;
यदि तपाइँ गर्भवती हुन योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ वा तपाइँ पहिल्यै गर्भवती हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं स्तनपान गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि। यसले तपाईंको डाक्टरलाई सहयोग पुर्याउन मद्दत पुर्याउनेछ कि यो औषधि भ्रूण वा बच्चालाई असर गर्दैन।
यदि तपाईले कुनै पनि गैरप्रणाली वा नुस्खा औषधि, आहार पूरक लिइरहनुभएको छ, वा यदि तपाइँ कुनै हर्बल तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने। केही औषधीहरूले सेर्मोरेलिन एसीटेटसँग राम्रो काम नगर्न सक्छ, र तपाईंको औषधिलाई सुरू गर्नु अघि तपाईंको इंजेक्शन वा मौखिक खुट्टा सुरु गर्नु राम्रो हुन्छ।
यदि तपाईं केही खानेकुरा, औषधि, वा अन्य पदार्थहरूमा एलर्जी हुनुहुन्छ भने।
साथै, आफ्नो चिकित्सकलाई भन्नुहोस् यदि तपाईसँग कुनै पनि दिमाग वा टाउको दुखाइ र रोगहरू छन् जुन तपाईं उपचारमा हुनुहुन्छ वा कहिलेकाहीँ तपाईले पछाडि आउनुभयो।
केही औषधीहरूले सेर्मोरेलिन एसीटेटको साथ राम्रोसँग कुराकानी गर्न सक्छन्, जबकि अरूले लागूपदार्थको प्रभावकारितालाई कम गर्न सक्छन्। त्यसकारण, पहिले नै भनिएको छ, तपाइँ अनुसार तपाईलाई सल्लाह दिइरहेका कुनै पनि अन्य औषधिको आफ्नो डाक्टरलाई सूचित गर्न राम्रो छ। केहि डाक्टरहरूले सिफारिस गर्न सक्नेछन् कि तपाईले पहिले नै लिनु भएको औषधीहरू समाप्त गर्नुहुने छ भने सेर्मोरेलिन एसिटेट लिनुस् वा यदि उनीहरूले कुनै प्रभाव पारेन भने तपाईं दुबै औषधीहरू दुवैमा लिन सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ निम्न औषधि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँको चिकित्सक प्रदायकलाई सूचित गर्न संकोच नगर्नुहोस्;
Cyclooxygenase inhibitors, जस्तै indomethacin र एस्पिरिन, glucocorticoids जस्तै prednisone, इन्सुलिन, वा दबाइहरु जुन तपाईंको शरीर को थाइरोइड स्तरहरु लाई कम गर्न सक्छन् जस्तै Propylthiouracil। अरुले सोटोस्टिनटिनसँग औषधिहरू समावेश गरेका छन् जुन लिटडोपा जस्तै somatostatin को रिलीज र क्लोनिडिइन पछि देखि उनि सर्र्मोरेलिन क्षमता को कम गर्न र तपाईं अधिकतम अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। सार्मोरेलिन एसीटेट परिणामहरू लामो समयसम्म औषधि लिन पछि।
ड्रग्सको सूची जुन तपाईंको शरीरमा काम गर्ने Sermorelin Acetate क्षमतालाई असर गर्न सक्छ धेरै लामो छ, र यसैले यो सधैं आवश्यक छ कि तपाईलाई राम्रो नतिजाको लागी कुनै पनि ड्रगको औषधिलाई सूचित गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ, तपाईले पनि सोच्नु भएको औषधहरू पनि असर गर्दैन, जस्तै हर्बल औषधिहरू गम्भीर दुष्प्रभावहरू हुन सक्छ। यदि तपाईंलाई राम्रो र अधिकतम परिणामहरू अनुभव गर्न आवश्यक छ भने केहि पनि मान्नुहोस्। सुरक्षित हुन पनि निश्चित छ कि तपाईं सम्पूर्ण औषधि प्रक्रियामा आफ्नो डाक्टर समावेश गर्दछौं। औषधि परीक्षण खुल्ला चक्र पूरा गर्न, पछि र पछि, एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँछ।
यसको अतिरिक्त, विकास हार्मोन को स्तर, साइड इफेक्ट, र उपचार को प्रगति को निगरानी गर्न को लागी तपाईंको डाक्टर ले प्रयोगशाला परीक्षण को लागी शुरू गर्यो। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ अधिकतम तपाइँको सेटरोरिन एसिनेट फायदाका लागि तपाईंका सबै डाक्टरहरूको नियुक्तिहरूको सम्मान गर्नुहोस्। महिलाहरु को लागि, यदि तपाईंलाई ध्यान दि्छ कि तपाईं आफ्नो खुराक को समयमा गर्भवती हो, तुरुन्त दबाइ को सूचित गर्नुहोस। यद्यपि, यो थाहा छैन कि तपाईंको बच्चा वा भ्रूण गर्न के लागी दवाव गर्न सक्दछ, तपाइँ स्तनपान वा गर्भवती हुँदा सर्र्मोरेलिन एसिटेट जारी राख्न सुरक्षित छैन। तथापि, यो मात्र चिकित्सा परीक्षा पछि छ जब तपाईंको चिकित्सकले तपाईंलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ। यो औषधिको जानकारी बिना तपाईंको औषधि को जानकारी नदिनुहोस्।
5. कहिलेकाँही हामी सर्र्मोरिन एसीनेटको नतिजा देख्न सक्छौं?
HGH र IGF दुवै निरन्तर छ र स्थिर छैन। यसैले, एक अनियमित रक्त परीक्षण र विश्लेषण निर्धारण गर्न को लागी पर्याप्त छैन कि Sermorelin Acetate काम सुरु गरेको छ वा छैन। Sermorelin Acetate वा समान दबाइहरु को वर्णन गर्ने डाक्टरहरु को अधिकांश सिगोलोजोलोजी को माध्यम ले ड्रग्स को प्रभावशीलता को मूल्यांकन गर्दछ, जो औषधि को लाभ, शारीरिक उपस्थिति र रक्त परीक्षा को विश्लेषण गर्न को लक्षणहरुको अध्ययन गर्दछ।
तपाईंले सुधार गर्नु र गुणवत्ताको निद्रा सुरू गरेपछि तपाईंको खुट्टा लिनको लागि सात हप्ता पछि सुरू गर्नाले Sermorelin Acetate फायदाहरूको अनुभव सुरु गर्नुहुनेछ। तथापि, यो केवल सजिलै संग व्यक्त गर्न सकिन्छ जुन गुणस्तरको निद्रामा कठिनाई छ। शरीरको ऊर्जाको स्तर पनि बढाइनेछ, र तपाईंको मूड अझ बढाइनेछ।
सामान्यतया, धेरै जना बिरामीले शरीरमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू रिपोर्ट गर्न सुरु गरेपछि तीन देखि छ महिना सम्म सेरमोरेलिन एसीटेट थेरेपी पछि विशेष गरी सेरमोरेलिन र तौल घट्नु। शरीरमा सुधारिएको हार्मोनको केहि भन्दा बढी प्रभावकारी प्रभावहरू दुबला मांसपेशी जनको विकास र समग्र शरीर स्वास्थ्यको ठूलो वृद्धिमा समावेश गर्दछ। सर्र्मोरेलिनको साथ अग्लो गर्ने लड्ने वयस्कहरूले पहिलो3महिना भित्र परिणामहरूको अनुभव सुरु गर्न सक्छन्।
राम्रो नतिजाहरूको लागि, तपाईंलाई नियमित रूपमा सेर्मोरेलिन इंजेक्शन गर्न आवश्यक छ किनभने यसले तपाईको शरीरको प्रणालीबाट छिट्टै सफा गर्दछ। कार्यको लागी औषधिको तन्त्रणा अधिकतर तपाईंको जैविक प्रक्रियामा प्रतिक्रियाहरूको श्रृंखलामा निर्भर गर्दछ जुन विकास हार्मोनको सुधारिएको उत्पादनको लागी हुन्छ। साथै, तपाईंको शरीर प्रणालीको आधारमा तपाईँले3वा6महिना पछि Sermorelin Acetate परिणामहरू देख्न सक्नुहुनेछ किनकि यो वृद्धि हार्मोन स्तरको लागि काम गर्न र इच्छित परिणामहरू प्रदान गर्न समय लाग्छ।
त्यहाँ कुनै स्पष्ट अवधि छैन कि सेर्मोरेलिन एसीटेट लिनु पर्दछ, तर तपाईले वृद्धि हार्मोन इष्टतम स्तर प्राप्त गर्नुभन्दा नै औषधी लिन कम गर्न वा रोक्नु पर्छ। यसैले नियमित प्रयोगशाला परीक्षाहरू हार्मोन तहहरूको निगरानी गर्न आवश्यक छ। तपाईंको डाक्टरले एक चिकित्सा परीक्षा गुजरने पछि आफ्नो खुट्टा लिने रोक्न सल्लाह वा सल्लाह दिनको लागि सही व्यक्ति हुनेछ। केहि रोगीहरूले पनि इष्टतम वृद्धि हार्मोन स्तर प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले 12 महिनाको लागि वा अधिक Sermorelin एसीटेट लिनुहोस्।
6. Sermorelin एसीटेट साइड इफेक्ट
बजारमा लागू औषधिको अधिकांश यदि सबैसँग केही साइड इफेक्टहरू हुनसक्दछ भने औषधि सही रूपमा प्रयोग गरिएन भने सानो वा पनि भरी हुन सक्छ। Sermorelin Acetate समीक्षाहरूमा हेर्दा केही प्रयोगकर्ताहरूले साइड इफेक्टका केही लक्षणहरू रिपोर्ट गर्छन्। तथापि, सबै खुराक निर्देशनहरू पछ्याउने रोगीहरू, र नियमित रूपमा नियमित परीक्षामा आएका हुन्छन्, धेरै भन्दा कम सेरमोरेलिन एसीटेट दुष्प्रभाव रिपोर्ट गर्नुहोस्।
यो सल्लाह छ कि तपाइँ यो हार्मोन औषधि बढाउन पछि अनुभव गर्ने कुनै अग्रिम प्रभावहरू रिपोर्ट गर्नुहोस्। सुसमाचार यो हो कि तपाईंको डाक्टरले तपाईंलाई Sermorelin Acetate साइड इफेक्ट नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्न सक्दछ भने तपाईले उसलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ। तपाईंको खुट्टा लिँदा केही सामान्य साइड इफेक्ट जुन तपाईंले अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ;
हेडब्लस र कहिलेकाहीं तपाईंको मुखमा एक अजीब स्वाद।
इंजेक्शन क्षेत्र को आसपास दुखाइ, पवित्रता, सूजन, या लालोपन।
मा Sermorelin Acetate समीक्षाहरू केही प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको निराशा र खराब अनुभव व्यक्त गरेका थिए जुन उनीहरुसँग सामान्य छ भने खुसी निर्देशनहरू पछ्याउँदैनन्। सानो साइड इफिगरेसन समय संग गायब हुन्छ, तर यदि उनीहरु बिस्तारै बिस्तारै अघि समाधान गर्न मद्दत पुर्याउन तपाईंको डाक्टरमा अपेक्षित कुरा भन्दा बढी रहन सक्दछन्। तथापि, त्यहाँ अन्य गम्भीर साइड इफेक्टहरू छन् जुन एक पटक तपाईंले तिनीहरूलाई अनुभव गर्नुहुन्छ, तपाईले तपाइँको औषधिलाई तुरुन्तै कल गर्नु पर्छ किनभने ती तीव्र वा अपरिवर्तनीय स्वास्थ्य अवस्थाको नेतृत्व गर्न सक्दछ। यी साइड इफेक्टहरू समावेश छन्;
हिप, रश, सासिंग कठिनाइहरू, छातीको कडाता, अनुहारको सुँगुर, होंठ, मुख वा जिब्रो जस्ता एलर्जी प्रतिक्रियाहरू।
यो सबै Sermorelin Acetate साइड इफेक्टहरू अपेक्षा गर्न चाहँदैनन् किनभने तिनीहरूमध्ये केहीले औषधी लिन सक्ने व्यक्तिमा निर्भर हुन सक्छ। यदि तपाईंको खुट्टा लिँदा असामान्य कुरा देख्नुहुन्छ भने तपाईंको डाक्टरलाई सूचित गर्न यो राम्रो विचार हुन सक्छ। तथापि, यी साइड इफेक्टहरूबाट आफैलाई सुरक्षित राख्न उत्तम तरीका खुट्टा निर्देशनहरूमा रहन्छ र साथै तपाइँको चिकित्सकको मेडिकल परीक्षाको लागि नियुक्तिको सम्मान गर्न। ओभरडाइम पनि उपदेश Acetate दुष्प्रभाव को बहुमत को एक अन्य प्रमुख कारण हो। यसकारण, यदि तपाईलाई अधिकृत औषधि लिनु भएको छ भने, तपाइँले तपाइँको डाक्टरलाई कल गर्नुहोस् वा सहयोगको लागि निकटतम मेडिकल हेल्थ सेन्टरमा जानुहोस्।
7. Sermorelin Acetate खरीद गर्न उत्तम स्थान
सर्वोत्तम सेर्मोरेलिन Acetate परिणामहरू प्राप्त गर्न एकमात्र तरिका हो कि तपाइँ यसलाई एक विश्वसनीय र सम्मानित विक्रेताबाट खरिद गर्न निश्चित छ। तपाईं सर्र्मोरेलिनसँग एगिंग लड्न वा आफ्नो शरीरको वजन नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ भने, उच्च कुञ्जी औषधिको औषधीले तपाईंलाई अधिकतम र छिटो नतिजा दिन्छ यदि तपाईले खुसी निर्देशनहरू पछ्याउनुहुन्छ भने। त्यहाँ थुप्रै सेर्मोरेलिन बिक्रेताहरू मार्केटमा छन्, तर दाँया एक हो भने सजिलो छैन यदि तपाईं सावधान हुनुहुन्न। तपाईंको चिकित्सक Sermorelin Acetate किन्न मद्दत गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो व्यक्ति हुन सक्छ।
वैकल्पिक रूपमा, तपाईं अनलाइन अनलाइन बिक्रेताहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईलाई निश्चित गर्नुहोस् Sermorelin Acetate खरीद गर्नुहोस् सबैभन्दा अनुभवी र भरोसेमंद निर्माता वा सेमेरोरेलिन सप्लायरबाट। नवलपरासी, असोज 19- मंसिर 19गते मंसिर29 गते मंसिर2गते बिहान बिहान बिहानै बस दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रहरीले जनाएको छ।
तपाईं सेर्मोरेलिन एसीटेट खरीद गर्नु अघि, तपाईलाई सूचित निर्णय गर्न मद्दत गर्नको लागि बिक्रेता ग्राहक समीक्षाहरू हेर्नुहोस्। हाल, हामी सर्वोत्तम सेर्मोरेलिन एसीटेट निर्माता र विक्रेता हो। हामी विश्वव्यापी र हाम्रो समय-समयमा डेलिभरीहरू बनाउँछौँ Sermorelin लागत बजारमा धेरै बिक्रेताहरूको तुलनामा कम पनि छ। तपाईं केवल आफ्नो अर्डर आफ्नो स्मार्टफोन, कम्प्यूटर वा ट्याब्लेट मार्फत बनाउन आवश्यक छ, र हामी तपाईंको उत्पादनलाई कम से कम समय सम्भव हुन सक्छ। हाम्रो कल लाइनहरू सधैं 24 /7खुल्ला छन्, र तपाईं हाम्रो सक्षम ग्राहक सेवा समुहबाट छिटो सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जब तपाईं हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। साथै, हाम्रो Sermorelin Acetate समीक्षाहरू मार्फत जानुहोस् र तपाईंलाई ध्यान दिनेछ कि हाम्रो अधिकांश ग्राहक हाम्रा उत्पादनहरूसँग सन्तुष्ट छन्।
हामी सधैँ हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा सेरमोरेलिन एसीटेट खरीद गर्नका लागि सल्लाह दिन्छु तर मेडिकल परीक्षाबाट फर्काएर यसलाई प्रयोग गर्न नदिनुहोस्। केवल एक चिकित्सकीय चिकित्सकले तपाईंको अवस्थाको लागि दायाँ खुराक सेट गर्नुपर्छ र साइमरोरेलिन Acetate जस्ता ड्रग्स प्रयोग गर्दा तपाईले कुनै साइड इफेक्ट नियन्त्रण गर्न मद्दत पुर्याउनु पर्छ। तपाईंले आफ्नो उत्पादन प्रयोग गर्न सुरु गर्नु अघि तपाइँ आफ्नो मेडिकल सर्भर प्रदायकसँग आफ्नो सबै प्रश्नहरू वा चिन्ताहरू उठाउनुहोस् अधिकतम सेमेरालोलिन एसिनेट लाभहरूको मजा लिनको लागि।